Ifulethi elingaphansi elithokomele e-Oakville - I-Airbnb
Ifulethi elingaphansi elithokomele e-Oakville
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Erin
Indawo ihlanzekile futhi ihlanzekile. Kunamawindi amabili avumela ukukhanya kwemvelo ukuthi kungene ekamelweni lokulala kanye nendawo yomhume. Ileveli eyodwa, umqondo ovulekile owenza kube lula ukuhambahamba futhi kuphephe ezinganeni ezincane.
Ifulethi lifika linefenisha ephelele. Ikhishi elihlome ngokugcwele elinohhavini we-microwave kanye nesiqandisi. Ifulethi linendawo ehlukile yokuwasha i-loader nedryer nendawo yokugcina.
Kukhona umbhede owodwa ongu-queen kanye nesikhala esikhulu sekhabethe lokungena ngokukhululeka.
I-sofa elihle eliluhlaza okwesibhakabhaka lihlukanisa igumbi lokulala nendawo yomhume futhi liphinde libekwe kahle phambi kwe-TV yesikrini esiyisicaba, siphelezelwa nesihlalo somfana ovilaphayo esinethezeke kakhulu ukuze aphumule, aphumule futhi ethule.
Kukhona indawo yokusebenza ye-laptop ekhishini noma itafula lasekhishini elikhulu lokudlela okuhle noma elisakazwayo uma uqeda umsebenzi ekhaya.
Ifulethi lisemgwaqweni othule onemindeni emincane nomakhelwane asebekhulile abanobungane. Umhambi wezinja wendawo uzokunikeza igagasi njengoba ehamba futhi izingane zigcwala imigwaqo ukuze zifunde esikoleni sendawo ekupheleni komgwaqo. Izihlahla ezinkulu zizungeza indawo kanye namapaki konke kuhambo lwemizuzu emihlanu.
Izindlela ezinhle ezizungeze indawo uma ufuna ukubaleka kancane emvelweni.
Izitobhi zamabhasi e-Oxford, emaphakathi nendawo naseMcCraney. I-Oakville HAMBA imizuzu eyi-10 ukushayela.
Uma uthanda ukuthenga indawo yase-Oakville iseduze nekhona.
Uma ufunda ikolishi i-Sheridan iyimizuzu emi-5 ukusuka e-Trafalgar, enyakatho ye-QEW.
Abanikazi bakhona nganoma yimiphi imibuzo ongase ube nayo. Vele uthumele umbhalo osheshayo noma i-imeyili futhi ngeke babe nokungabaza ukuphendula ngokushesha.